डा. मनप्रसाद वाग्लेको खण्डकाव्य “यौन शिक्षा” लोकार्पण | Nepali Sahitya Ghar – नेपाली साहित्य घर
Home समाचार कृति सार्वजनिक डा. मनप्रसाद वाग्लेको खण्डकाव्य “यौन शिक्षा” लोकार्पण
डा. मनप्रसाद वाग्लेको खण्डकाव्य “यौन शिक्षा” लोकार्पण
on: मंसिर २१ , २०७७ आईतवार- ०३:०८
शिक्षा क्षेत्रमा आफ्नो पकडबनाएका शिक्षाविद् डा. मनप्रसाद वाग्लेद्वारा लिखित ‘यौन शिक्षा’ नामक खण्डकाव्य सार्वजनिक भएको छ । उक्त खण्डकाव्यको बिमोचन छन्द चौतारी, प्रतिभा निकुन्ज र कोक गोष्ठीको सहकार्यमा सम्पन्न भएको हो । पुस्तकको विमोचन गर्दै आधुनिक आसु कवि रमेश खकुरेलले पुस्तकको महत्व, रचनाकारको परिपक्वता र यौन शिक्षाको बारेमा समाजको आवश्यकता बारेमा प्रकाश पार्नुभएको थियो ।
त्यस्तै, स्वागत मन्तव्य दिँदै साहित्यकार कोषराज न्यौपानेले पुस्तकको महत्वबारे प्रकाश पार्नु भयो । पुस्तकको समीक्षा कवि कृष्ण शरण उपाध्यायले कवितामा नै गर्नुभयो र पुस्तकको अपरिहार्यताका बारेमा ब्याख्या गर्नुभयो । सार्वजनिक गरिएको पुस्तक ‘यौन शिक्षा’ खण्डकाव्यबाट टिका आत्रेय, कल्पना भट्टराई र शिव त्रिपाठीले केही श्लोक पनि वाचन गर्नुभएको थियो ।
जुम प्रविधिबाट गरिएको उक्त पुस्तक सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा आफ्नो कृतिबारे बोल्दै डा. वाग्लेले विद्यालय र कलेजमा पढ्ने सबै विद्यार्थी र १० वर्ष उमेरदेखि माथिका र वृद्धवृद्धा समेतलाई अनौपचारिक रूपमा यौन शिक्षा पस्कनु पुस्तकको मुख्य उद्देश्य रहेको बताउनु भयो । कवि भुवनहरि सिग्देलले यो पुस्तक यौन–विज्ञान नै हो भन्ने मन्तव्य दिनुभयो । अहिलेको प्रतिकुल अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सो कार्यक्रम जुम प्रविधिबाटगरिएको थियो भने समारोहमा विभिन्न बरिष्ठ कविहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
शिखा बुक्सले प्रकाशन गरेको उक्त खण्डकाव्य सर्वत्र बजारमा उपलब्ध भइसकेको प्रकाशकले बताएका छन् भने उक्त बहुउपयोगी पुस्तकको मूल्य २१५ रहेको छ ।
आकाश अधिकारीका दुई कृति सार्वजनिक
बोस्टनमा अनेसासको नयाँ समिति